प्रचण्ड र देउवाको भयो मिलन – दिए यस्तो क’ठोर कदम चाल्ने संकेत ! – Enews Odisha
प्रचण्ड र देउवाको भयो मिलन – दिए यस्तो क’ठोर कदम चाल्ने संकेत !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकताप्रति कतिपय पूर्व माओवादी असन्तुष्ट थिए । उनलाई एकता नगरौं भनेर लामो समय साथ दिएका कतिपय नेताहरुले सुझाव पनि दिएका थिए । सबैको सुझावलाई पन्छाएर प्रचण्डले जोखिम मोलेर तत्कालिन नेकपा एमालेसँग प्रचण्डले एकताको हात बढाए । अहिले त्यही एकताबाट प्रचण्ड पछुतो मान्न थालेका छन् ।
प्रचण्डले बेला बेलामा एकताबारे पछुतो लाग्न थालेको भन्ने गरेका थिए । आफू निकटस्थसँगको भेट कहीं कतै गल्ती त गरिएन भन्थे । पछिल्लो समय उनले राजनीतिक जीवनमा गल्ती गरिएछ नै भन्न थालेका छन् । प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका अनुसार एकता चौतर्फी घेराबन्दी बनेको निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेका छन् । उनले नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका भएको समेत भन्न थालेका छन् ।
आफ्ना सबैभन्दा नजिकका कृष्णबहादुर महरा महिलामाथि ज’र्बजस्ती प्र’करणमा परेपछिको घ’टनाक्रमप्रति प्रचण्ड सतर्क भएका छन् । ओलीले महराले अमेरिकी विकास सम्झौतासम्बन्धी र’णनीति सम्झौता ‘एमएमसी’ संसदबाट पारित गर्नबाट अड्काएको खुलाएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट भएका छन् । देव गुरुङले महरा प्रकरणपछिका घ’टनाक्रम पश्चिमा ष’ड्यन्त्र हुनसक्ने बताइरहँदा ओलीको भनाई बाहिर आयो । यसलाई प्रचण्डले ओलीको चे’तावनी र त्रास देखाएको रुपमा बुझेको उनी निकटस्थ एक नेताले रिपोर्टर्स नेपाललाई बताए । ती नेताले भने, ‘पूर्व माओवादी हामीलाई कमजोर बनाउने ष’ड्यन्त्रका रुपमा पछिल्लो घ’टनाक्रमलाई बुझिएको छ ।’
अमेरिका र पश्चिमालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ओली र प्रचण्डबीच द्ध’न्द्ध च’र्केको रिपोर्टर्स नेपालले १ कात्तिकमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । विदेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोणका अलावा सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बखत प्रचण्डलाई एक्लै भेट्नबाट रोक्न खोज्ने प्रयास समेत नेकपाभित्रबाट भएको सूचना चुहियो । तर, प्रचण्डलाई सीले भेटे ।
सरकारमा आलोपालो सहमतिको विषय प्रचण्डले चुहाइसकेका छन् । यसको पालना हुनेमा प्रचण्ड स्वयं शं’का गर्न थालेका छन् । नेकपाभित्र ओलीनिकटस्थले आलोपालो सहमति नभएको र ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् । यी भनाईहरुलाई ओलीले नै प्रोत्साहित गरेको बुझाई पूर्व माओवादीभित्र रहेको छ । यसले पनि प्रचण्ड सतर्क बनेका छन् ।
आलोपालो समति बनेको हो र त्यसको कार्यान्वयन हुने भने अबको आठ महिनापछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर, त्यसमा धोकाधडी हुनसक्नेतर्फ प्रचण्डलाई निकटस्थले सचेत गराएका छन् । एकतापछि पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी छुट्टिइरहेको अवस्थाबीच प्रचण्डले आफूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको विषयबारे समिक्षा गरिरहेका छन् । उनी निकटस्थहरुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घ’टनाक्रमबारे बसेर समिक्षा समेत गरेका छन् ।
Previous Article महरासँग बयान : के भने रोसनीसँगको सम्बन्धका विषयमा
Next Article विवादित गीतका गायक दुर्गेश थापा पक्रा’उ